के डिस्काउंटि Free एक नि: शुल्क भन्दा अधिक एक ब्रांड मूल्यांकन? | Martech Zone
के डिस्काउंटि Freeले एक नि: शुल्क भन्दा बढि कुनै ब्रान्डको मूल्यांकन गर्दछ?
मंगलवार, मार्च 17, 2015 मंगलवार, मार्च 17, 2015 Douglas Karr
हामीले मेरो मिडिया मार्केटि World वर्ल्डमा मेरो आगामी प्रस्तुतीकरणको बारेमा राम्रो छलफल गरिरहेका थियौं कि हामी मेरो कार्यक्रम वा समग्रमा उपस्थित भएका मानिसहरूलाई कस्तो किसिमको प्रस्ताव दिन सक्छौं। कुनै कुराकानी वा नि: शुल्क विकल्प हामीले प्रदान गर्ने कामको अवमूल्यन गर्न सक्छ कि छैन भनेर कुराकानीको साथ आएको छ।
मैले सिकेको एउटा पाठ भनेको मूल्य सेट भए पछि मूल्य सेट हुन्छ। यसले सामान्य रूपमा फरक पार्दैन कि हामी कस्तो किसिमको परिणामहरू लिएर हाम्रो क्लाइन्टहरू पाइरहेका छौं, तिनीहरू प्राय: जसो हामी कहाँ फर्कन्छौं do र तिनीहरू के हुन् हामीलाई भुक्तानी गर्दै अन्य विक्रेताहरूको तुलनामा। त्यसोभए - यदि हामीले ग्राहकलाई हामीले प्रदान गरेको पहिलो प्रोजेक्टको लागि छुट प्रदान गर्यौं भने, हामीले उनीहरूलाई पूरा मूल्यको लागि दोस्रो प्रोजेक्टमा अप्ट इन गरेको कहिल्यै देखेनौं। यो हाम्रो गल्ती हो… हामीले अगाडि संलग्नता छुट दिएर हाम्रो कामको अवमूल्यन गर्‍यौं।
गहिरो छुटले उत्पादन वा सेवाको अवमूल्यन गर्दछ, कम्पनीहरूको मूल्य बढाउनको क्षमता सीमित गर्दछ। रफी मोहम्मद, एचबीआर डिस्काउंटहरू खाल्नुहोस्.
केही हप्ता पहिले, मैले यसको बारेमा मेरो साथी जेम्ससँग छलफल गरिरहेको थिएँ जोसँग एक हो इन्डियानापोलिस पिज्जरिया। उसले मलाई भन्यो कि ऊ छुटमा भन्दा दिईन्छ। व्यक्तिहरूले नि: शुल्क खानाको नमूनाले खानाको मूल्य पहिचान गर्दछन् जबकि कुपन प्रस्तावको बाहिर आउनेहरू केवल सम्झौताको लागि आउँदछन् - खानाको गुणवत्ता होइन। कुपनहरूले उत्पादन र सेवाको अवमूल्यन गर्दछ त्यसैले जेम्सले तिनीहरूलाई गर्न रोकिदिए।
उपभोक्ताहरू विश्वास गर्छन् कि नि: शुल्क उत्पादनको मूल्य खरीद गरिएको उत्पादको मूल्यसँग अनुरूप हुन सक्छ, उच्च-उत्पादको साथ एक स्वतन्त्र उत्पादको जोडा बनाउनेले यसको मूल्यको धारणालाई राम्रोसँग बढाउन सक्छ। मौरिसियो एम। पाल्मिरा (मोनाश विश्वविद्यालय) र जयदीप श्रीवास्तव (मेरील्याण्ड विश्वविद्यालय) मार्फत जब उपभोक्ताहरू एक फ्रीबी सोच्छन् एक छुट उत्पाद भन्दा बढी मूल्यवान छ?
यसकारण निशुल्क ढुवानी ecommmerce साइटहरु को साथ यति लोकप्रिय छ। तपाईंले बेच्नु भएको उत्पादनको अवमूल्यन गर्नुको सट्टा तपाईं केही थप प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ - उपभोक्ताहरूका लागि उत्पाद वा सेवाको अवमूल्यन नगरी बुझ्नको लागि साधारण अवधारणा।
हाम्रो नतिजा निश्चित छ, निश्चित छ। हामीलाई थाहा छ कि जब हामी हाम्रो सments्लग्नताका बारे छलफल गर्छौं तब हामी छुटको सट्टामा टाढा हिंड्नुपर्दछ। वा हामी निर्धारण गर्न सक्दछौं कि केहि थप उत्पादन वा सेवा हामी थप्न सक्दछौं। उदाहरण को लागी, हाम्रो क्लाइन्ट एक साप्ताहिक र मासिक गुगल एनालिटिक्स रिपोर्ट प्राप्त गर्दछ कि GA एक धेरै राम्रो, पठनीय रिपोर्ट मा राख्छ जुन कार्यकारी सिंहावलोकनको लागि शानदार छ। जब हामी सेवाको लागि भुक्तानी गर्छौं, यो एक मान थपिएको छ जुन हामी खुशीसाथ दिन्छौं जब सम्म हामीले प्रदान गर्ने सेवाहरूको लागि पूर्ण पैसा तिर्ने गर्छौं।
मार्केटिंग टेक्नोलोजी कम्पनीहरूका लागि, म कुनै दिन छुटमा निःशुल्क परीक्षण सिफारिस गर्दछु। ग्राहकलाई तपाईंको प्लेटफर्म ड्राइभ गर्न दिनुहोस् र आफ्नै लागि मूल्य हेर्नुहोस् - र त्यसपछि तिनीहरूले खुशीसाथ सेवाको लागि तिर्ने छन्।
के तपाईं छुट गर्नुहुन्छ? के तपाई बिभिन्न नतिजाहरु देख्दै हुनुहुन्छ?
टैग: कुपनअवमूल्यनछुटछुट बनाम नि: शुल्कमुक्त
अभियान मोनिटर: एजेन्सी वा व्यवसाय को लागी एक मजबूत ईमेल सेवा
सन्देश क्लाउडले प्रासंगिक सन्देश इन-स्टोर मोबाइल अनुभवहरूमा जोड्दछ
मार्क्स 17, 2015 मा 8: 33 PM
हो म कहिले पनि छुट हुँदैन।
मार्स 18, 2015 मा 5: 06 एएम
जहिले पनि ठूलो छुट छुट मूल्य मा भ्रम को कुरा हो त्यसैले विश्वास को स्तर कमी